Masinina fanamarihana laser UV tsara indrindra BL-MUV-5W mpanamboatra sy orinasa | Boln
1.Ny kalitaon'ny laser manjavozavo, toerana kely dia kely, nahitana vokatra tsara marika
2.Ny faritra misy fiatraikany amin'ny hafanana dia kely dia kely ary tsy misy fiantraikany amin'ny hafanana. Ireo fitaovana fanamarihana dia tsy ho lany endrika ary hodorana
3.Quick manamarika ny hafainganana sy ny fahombiazan'ny fiasa avo;
4.Ny milina iray manontolo dia miorim-paka amin'ny asany, miaraka amin'ny fanjifana herinaratra ambany sy ny fiasan'ny Internet maharitra.
5. Natao ho an'ny tontolon'ny indostrialy, ny fananganana kalitao avo lenta dia mahafeno ny fepetra takiana rehetra momba ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny fenitra indostrialy avo lenta. Ny loharanom-boaloboka marobe dia ahafahana manome marika marimaritra iraisana amin'ny faritra samihafa.
6.Ny masinin'ilay rindrambaiko laser BOLN, ny angona mavitrika toy ny isa serial, kaody barcode, kaody matrix data, anaran'ireo orinasa, isa maro, sns ... dia azo ampiharina amin'ny fomba mora sy mahomby amin'ny tranga rehetra.
7. Ny votoatin'ny fanamarihana dia misy laharana serial, endrika daty, hajia fotoana, famoronana kaody fizarana mandeha ho azy miaraka amin'ny tsindry iray fotsiny, lahatsoratra feno na tsipika, lahatsoratra boribory, kaody 1-D sy 2-D, sary ary sary, antontan-taratasy PDF misy sosona samihafa , fisie sary (jpg, bmp, sns.), rakitra DXF sy PDF misy sosona samihafa;
8. Raha dinihina ny famokarana azo antoka, dia tsy ny fiarovana ny mpandraharaha amin'ny fikirakirana ny sela laser an'ny kilasy laser 2 ihany no tianay holazaina, fa ny singa avo lenta ihany no ampiasaina ary noho izany dia tohanan'izy ireo amin'ny famokarana isan'andro.
Teo aloha: Milina fanamarihana laser feno
Manaraka: Masinina fanamarihana laser laser BL-MCO2-30W